यौन उत्तेजना बढाउने औषधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २१, २०७५ समय: १४:३४:५४
सेक्स पावर बढाउने औषधि सामान्यतया यौन दुर्बलता भएका वयस्क मानिसहरुको लागि उत्पादन गरिएको हुन्छ । डाक्टर भट्टराईका अनुसार यस्तो औषधि समबन्धित बिशेषज्ञको सल्लाह बिना खान मिल्दैन । डाक्टरले रोग पहिचान नगरी यस्तो औषधि खाएमा निकट भविष्यमा गम्भिर असर पर्न सक्छ । उनी भन्छन ‘यस्तो औषधि समबन्धित विषयको डाक्टरको पुर्जा बिना बेच्न मिल्दैन तर यहाँ मनपरि छ । अबैध औषधिसमेत बिक्री भएको छ, जुन औषधि भित्र के छ त्यसको ? असर र परिणाम कसैलाई थाहा नै छैन ।’ उनको अनुसार कसलाइ के आवश्यक छ, त्यो डाक्टरले छुट्याउने हो । कुन उमेरमा कस्तो रोग लाग्छ र कती मात्रामा कुन औषधि प्रयोग गर्ने डाक्टरको सल्लाह लिने हो । सेक्स जस्तो सम्बेदनशिल विषयको औषधि चाउचाउ चकलेट खाएजस्तो हावा तालमा खाने होइन । अनि, कसैलाई गलत नियतले खुवाउने पनि होइन किनकि यसले दिर्घकालिन रुपमा खतरा निम्त्याउछ ।
के असर गर्छ यो औषधिले सामान्यतया मानिसलाई ज्वरो नआइकन सिटामोल खायो भने मात्र पनि त्यसले असर गर्छ । मानिसलाई आवश्यक नै नभएको औषधि चकलेट सरह खादाँ असर त पर्ने नै भयो । डाक्टर भटट्राई भन्छन ‘यस्तो औषधिहरु सामान्य मानिसले खादाँ छाती पोल्ने, वाकवाकी लाग्ने, रिङगटा लाग्ने, बेहोस हुने जस्ता तत्कालिन असर देखापर्छ । तर, दिर्घकालिन रुपमा यसको खतरा डरलाग्दो छ । उनका अनुसार यस्ता औषधि सामान्य मानिसले प्रयोग गर्दा भविष्यमा यौन दुर्बलता हुने, पुरुषहरु नपुशंक हुने तथा महिलाहरुमा बाझोपन बढ्ने खतरा हुन्छ । ‘यस्ता औषधिको प्रयोग बानी पर्दै गएमा पछि गएर यौन जीवनमा नकरात्मक असर पर्छ ।’ डाक्टर भट्टराई भन्छन ‘त्यसका साथसाथै विभिनन्न यौन तथा यौनजन्य रोग लाग्ने खतरा समेत उत्पन्न हुन्छ ।’ जनबाेलीबाट